Soomaalida oo kamid ah dadka midabtakoor(faquuqa) ugu badan kula kulma Norwey - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Soomaalida oo kamid ah dadka midabtakoor(faquuqa) ugu badan kula kulma Norwey
Warbixin ay soo saartay hay-ada qaabilsan tirokoobka iyo iyo ixsaa-iyaadka ee SSB( statisk sentralbyrå) ayaa sheegtay in soomaalida, Ciraaqiyiinta iyo Iiraaniyiinta ay yihiin sadexda qowmiyadood ee ajnabiga ah ee cunsuriyada ugu badan kala kulma Norwey. Inkastoo ay arintan la wadaagaan dhamaan dadka ajnabiga ah, hadana sadexdan guruub ayaa si gooni ah ula kulma faquuq iyo loola dhaqmo si ka gadisan sida dadka kale loola dhaqmo.
Meelaha ugu badan ay kala kulmaana ay kamid tahay suuqa shaqada, guryaha, meelaha lagu kulmo, goobaha waxbarashada iyo caafimaadka. Baaritaan ay sameysay SSB ayay sheegtay in ajaanibta ka timid Afrika iyo Aasiya ay bixiyaan lacag ka badan tan ay bixiyaan dadka intiisa kale, marka ay guri kireysanayaan.
Horey ayaa waxaa dhowr jeer oo kala duwan la cadeeyay in hadii uu magacaagu yahay Henrikson aad laba jibaar ka jaanis fiicantahay inaad shaqo hesho, hadii uu magacaagu yahay Cabdi ama Mohamed.
Previous articleBanaanbax looga soo horjeedo barnevern-ka oo ka dhacay 20 wadan
Next articleWasiirkii shaqada Norwey oo shaqo la,aan weyn haysato.